Famintinana tsotra momba ny fahazoan-dàlana Creative Commons | Famoronana an-tserasera
Famintinana tsotra momba ny fahazoan-dàlana Creative Commons
Judit Murcia | | General, maro
Na dia misy maromaro aza Lalàna miaro ny zon'ny mpamorona, sarotra ny mifehy ary bebe kokoa raha ny tambajotra no resahina. Mpanoratra maro no mamela ny mpampiasa hafa hampiasa ny sangan'izy ireo amin'ny fepetra sasany. Ireo fepetra ireo dia apetraky ny Fahazoan-dàlana Creative Commons. Mamela antsika izy ireo ary manome toky anay fa hanana zona atiny.
Misy totalin'ny karazana lisansa Creative Commons enina samihafa. Raha liana te hahafantatra bebe kokoa momba an'io lohahevitra io ianao, dia aza atsahatra ny famakiana fa hanome famintinana tsotra momba izany izahay. Azonao atao ny mandray soa na mpanoratra ianao izay te hizara ny sangan'asan'izy ireo, na amin'ny lafiny iray, mpampiasa ianao izay te hampiasa fitaovana avy amin'ny hafa na dia manaja ny fepetra aza.
1 Inona ny Creative Commons?
2 "Layers" fahazoan-dàlana Creative Commons
3 Karazana fahazoan-dàlana
4 Fahazoan-dàlana bebe kokoa, ny tena mamepetra
Inona ny Creative Commons?
Araka ny efa nolazainay tamin'ny lahatsoratra teo aloha, ny Creative Commons dia momba ny a fikambanana tsy mitady tombontsoa. Any California, Etazonia no misy azy. Natokana ho an'ny manome antoka ny mpanoratra amin'ny sombin-javatra samihafa ny fetran'ny fitrandrahana ny sangan'asany na famoronana amin'ny Internet. Etsy ankilany, mamela ny mpampiasa hampiasa ara-dalàna ny tetik'asa na ny asan'ny hafa izy, raha hajaina ny fahazoan-dàlana.
Misy samy hafa karazana fahazoan-dàlana Creative Commons. ny ny sary famantarana samy hafa dia mifandraika amin'ny lisansa tsirairay ary, noho izany, ny alalana samy hafa avelan'ny tsirairay amin'izy ireo. Ho hitantsika eto ambany izy ireo hahafantatra izay atolotray antsika.
"Layers" fahazoan-dàlana Creative Commons
Rehefa miantso azy ireo izy ireo, fahazoan-dàlana dia ahitana "sosona" telo. Voalohany indrindra, hitantsika ny sosona voalohany izay ho hitantsika amin'ny lisansa rehetra: Kaody Legal. Satria tsy ny mpampiasa rehetra no manana fahalalana ara-dalàna, ny soso-kevitra faharoa dia ny "Deed Common" na "vakin'olombelona".
La Ny sosona farany an'ny fahazoan-dàlana dia ilay eken'ny rindrambaiko. Ampiasaina izy io mba hanamorana ny famantaran'ny tranonkala ny sanganasa amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana Creative Commons. Ny fandikan-teny amin'ity tranga ity dia "Azo vakiana ny masinina".
Ireo fahazoan-dàlana ireo dia manana masontsivana samihafa izay azo atambatra. Hitantsika etsy ambany izy ireo:
Attribution (BY): Ity fahazoan-dàlana ity dia mamela ny hafa hampiasa ilay asa raha mbola ekena ny mpanoratra ny famoronana voalohany. Izy io dia azo zaraina, afangaro, ampiasaina amin'ny tanjona ara-barotra ankoatra ny tanjona hafa. Raha fintinina, azo ampiasaina ny sanganasa, fa mitanisa ny mpanoratra.
Mizarà mitovy (BY-SA): Raha te hampiasa ireo sanganasa eo ambanin'io fahazoan-dàlana io dia ilaina ny manonona ny mpanoratra ary manome alalana ny asa vaovaon'izy ireo amin'ny fe-potoana mitovy izy ireo, dia tokony hitovy izy ireo.
Tsy misy asa derivative (BY-ND): Amin'ity tranga ity, ny asa dia azo ampiasaina, izany hoe ny fizarana fizarana azy, ara-barotra na tsia, raha mbola tsy novaina ary ampitaina manontolo. Ary mazava ho azy, fanekena ny mpanoratra.
Tsy ara-barotra (BY-NC): Io dia ahafahanao manova ny sanganasa ary manangana hafa amin'ny voalohany fa raha mbola tsy ara-barotra ny tanjony.
Ireo efatra etsy ambony ireo no tena lehibe, saingy misy roa hafa izay mampifangaro ny takiana, izay nohazavainay etsy ambany.
Fahazoan-dàlana bebe kokoa, ny tena mamepetra
Manaraka izany, hotanisainay ireo fahazoan-dàlana roa tavela, ireo dia manambatra ny takiana voalaza etsy ambony. Andao fantarina izy ireo:
Tsy ara-barotra - Tsy misy asa avy amin'ny derivative (BY-NC-ND): Io no fahazoan-dàlana mametra rehetra. Mamela antsika hisintona ny sanganasa fotsiny izany ary mizara azy raha mbola ekena ny mpanoratra ary tsy novaina. Ary koa, tsy mety ho amin'ny tanjona ara-barotra.
Tsy ara-barotra - Tsy misy asa avy amin'ny derivative (BY-NC-SA): Ity fahazoan-dàlana ity dia ahafahantsika mampifangaro, manamboatra ary mamorona amin'ny asa tany am-boalohany raha mbola tsy natao ho an'ny tanjona ara-barotra. Tokony hanaiky ny mpanoratra ihany koa ianao ary hanome ilay lisansa mitovy amin'ilay sanganasa vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Famintinana tsotra momba ny fahazoan-dàlana Creative Commons
Ny afisy Game of Thrones mahatalanjona rehetra amin'ny vanim-potoana fahavalo sy farany ho avy